पशुपतिशम्शेर जबरालाई मु क्का प्र हार! – NepalajaMedia
पशुपतिशम्शेर जबरालाई मु क्का प्र हार!
January 11, 2021 44
काठमाडौं, २७ पौष – आज २९९ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय ए कता दिवस। पृथ्वी जयन्तीको अ वसरमा विविध का र्यक्रम गरी म नाइँदैछ। यसैक्रममा २९९ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मूल समारोह समितिको आ ह्वानमा काठमाडौंमा र्‍या ली नि कालिएको छ।
सिं हदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा मा ल्यार्पणको लागि स हभागीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। जसले गर्दा त्यहाँ सुर क्षा व्य वस्था क डा पा रिएको छ। उक्त क्षेत्रमा प्र हरी प रिचालन ग रिएको छ। प्रतिमा भएको क्षेत्रमा एक स मूह प्रवेश दिइए पनि अरु स मूहलाई बिच स डकमै रो खिएको छ । स हभागीले प्र हरी वि रुद्ध ना राबा जी गरेका छन् । सो क्षेत्रमा आ वातजाव त गर्न पूर्ण रुपमा रो क लगाइएको छ। सड कपेटीमा हिँ ड्नेहरुमाथि प्र हरीले ला ठीचा र्ज गरेको छ।
प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा जान रो क्न खो जे पनि स हभागीहरू अघि बढेका छन्। र्‍यालीमा प्रहरीले धरपकड गरेको छ। र्‍यालीमा सहभागीले प्र हरी वि रूद्ध ना राबा जी गरेका छन्। भद्रकाली–सिंहदरबार क्षेत्रको अ वस्था अहिले ‘त नावग्र स्त’ छ । प्र हरीले रो क्न खोजेको छ भने स हभागीहरु अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । प्रहरीले राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरालगायतलाई ध रपक ड गरेपछि केही समय ध के ला धकेल भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागी एकजनाले भने, हाम्रा नेतालाई प्र हरीले मु क्का हानेपछि स्थिति अ सहज ब नेको थियो ।
सहभागीहरूले अ खण्ड नेपाल जिन्दावाद, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्रा णभन्दा प्यारो छ, पृथ्वी नारायण शाह अमर रहून् लगायत नारा लगाइरहेका छन्। यो अ भियानमा अभिनेत्री मनिषा कोइराला, पुर्व डि आईजी रमेश खरेल तथा भरत बस्नेतसहितको स क्रिय स हभागिता रहेको छ । समितिले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय ए कता दिवसको महत्व बुझिदिन पनि स बैसँग आग्रह गरेको छ।
Prevएकता दिवस मनाउन सिंहदरबार पुगेकाहरु र प्रहरीबीच झडप, एक महिला घाइते
Next‘धूम ४’ मा भिलेन बन्दै दीपिका
फागुन ०५ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल